samsung galaxy S3 GT- i9300 ကို latest official android 4.3 တင်နည်း| root လုပ်နည်း | မြန်မာစာသွင်းနည်း ~ သား​ကောင်းရတနာ(နည်းပညာ)
samsung galaxy S3 GT- i9300 ကို latest official android 4.3 တင်နည်း| root လုပ်နည်း | မြန်မာစာသွင်းနည်း
3/16/2014 Firmwareတင်နည်းများ, Root လုပ်နည်းများ, နည်းလမ်းများ No comments
samsung galaxy S3 GT- I9300 အတွက် january 27, 2014 နေ့ထွက် build number I9300XXUGML3_I9300OLBGML3_XME malaysia firmware ကို ကိုယ်တိုင်တင်မယ် root လုပ်မယ် မြန်မာစာသွင်းကြမယ်ဗျာ......... ကျွန်တော်တို့ နည်းလမ်းလေးမစခင် သိသင့် သိထိုက်တာလေးတွေအရင်ဆုံးပြောပါရစေ။ ဒီနည်းလမ်းလေးကို android user တော်တော်များများ သိပြီးသားပါ။ နည်းလမ်းလေးကလွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းက samsung galaxy S3 GT- I9300 တစ်မျိုးထဲ အတွက်ပါ။ မိမိရဲ့ phone model ကို setting / more / about device အဆင့်ဆင့်ဝင်ပြီးစစ်ကြည့်ပြီးမှ သေချာတယ်ကိုက်ညီတယ်ဆိုမှ ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ နောက်ထက် သတိထားရမှာက ကျွန်တော်တင်ပေးထာတဲ့ Ordin3 v 3.09 နဲ့ပဲသုံးပါ။ တစ်ခြား ကိုယ့်မှာရှိပြီးသား Ordin နဲ့လုပ်မိလို့ တစ်ခုခု error ဖြစ်သွားရင်တော့ your own risk ကိုယ်ဖော်တဲ့ဆေး ကိုယ်စားပေါ့နော် ..... နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျာ တစ်ခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး S3/ note2/ note3 တွေ 4.3 firmware update လုပ်ရင်ပါလာတဲ့ Knox application ပါ ထူးစမ်းတာက ကျွန်တော် ဒီ firmware ကို update လုပ်ပြီးသွားတော့ ဘာ Knox မှပါမလာဘူးဗျာ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ် Knox ကို android version 4.3 မြှင့်ရင်သတိထားဖို့ root မလုပ်ခင် Knox ကို desiable လုပ်ဖို့ site တိုင်းမှာ ပြောနေကြတော့ ကျွန်တော် လိုက်ရှာတယ် မတွေ့ဘူး တစ်ခြား နာမည်းနဲ့များ ပါလာမလား? လိုက်ရှာတယ် မတွေ့ဘူး အဲတာနဲ့ ကျွန်တော် online မှာ thailand firmware လိုက်ရှားပြီး ထက်တင်ကြည့်တယ် ဒါလဲ Knox ပါမလာသလို မြန်မာစာလဲပါမလာပါဘူး ကဲရှိစေတော့ ဟဲ့ဆိုပြီး ဖြစ်ချင်တာဖြစ် မောင်ဘချစ် root လုပ်လိုက်တယ် အစင်ပြေတယ်။ မြန်မာစာသွင်ကြည့်တယ် ငြိမ်နေတာပဲ ဘာမှ error မရှိပဲပြီးဆုံးသွားတယ် ဒါပါပဲ။ ကဲကျွန်တော် လျှာရှည်တာလဲများသွားပါပြီ ကျွန်တော်တို့ နည်းလမ်းလေး စလိုက်ကြရအောင် .....
ပထမဆုံးsamsung galaxy S3 GT-I9300 build number I9300XXUGML3_I9300OLBGML3_XME malaysia firmware အတွက် လိုတာလေးတွေအောက်မှာ အရင်ယူထားလိုက်ပါ။
၂။Ordin3 v 3.09
၃။ I9300XXUGML3_I9300OLBGML3_XME FIRMWARE
၁။ဖုန်းကို အနည်းဆုံး battery အား 60% ရှိအောင်ထားပါ။ 100% ရှိရင်ပိုကောင်းပါတယ်
၂။SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe ကို PC မှာ install လုပ်ပါ။
၃။ Ordin ကို Zip ဖြည်ပြီး PC မှာclick နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်ပါ။
၄။ phone ကို power ပိတ် home+volume down + power key သုံးခုကိုတစ်ပြိုင်တည်း နှိပ်ပြီး volume up ကိုထက်နှိပ်ပေးပါ။
၅။ Downloading do not turn off target ! ဆိုတဲ့စာရောက်ရင် phone ကို USB ကြိုးနဲ့ PC မှာချိတ်လိုက်ပါ။
၆။ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Ordin မှာ 0:COM5 ဆိုပြီး ပန်းရောင်လေးပြောင်းနေတာတွေပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် AP ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ Download ဆွဲလို့ရလာတဲ့ firmware ကို Zip ဖြည်ပြီးထည့်လိုက်ပါ။ အောက်မှာ ပုံလေးနဲ့ပြပေးထားပါတယ်
၇။ပြီးရင် Ordin ရဲ့အောက်နားက start ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီး pass ဖြစ်တဲ့အထိ စောင့်ပေးပါ။ pass ဖြစ်သွားရင် samsung galaxy S3 GT- I9300 အတွက် android 4.3 update လုပ်ခြင်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပါပြီ
၈။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ root လုပ်ဖို့အတွက် အပေါ်မှာကျွန်တော် ရှင်းပြခဲ့သလို နံပက်(၄) ကနေ (၇)အထိ အဆင့်ဆင့် လုပ်သွားပြီး firmware ထည့်ရမယ့် AP ဆိုတဲ့နေရာမှာ အောက်က root tool လေးကို Zip ဖြည်ပြီးထည့် start ကိုနှိပ် pass ဖြစ်သွားရင် super user လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် ဒါဆိုရင် root လုပ်တဲ့အဆင့်လဲပြီးသွားပါပြီ
၉။ကဲနောက်ဆုံး အဆင့် မြန်မာစာသွင်းဖို့အတွက် အောက်မှာပေးထားတဲ့ smartzawgyi4.3advanced ကိုအရင်ဆုံး ယူထားလိုက်ပါ။
၁၀။Download ပြီးရင် ရလာတဲ့ smartzawgyi4.3advanced ကို zip ဖြည်လိုက်ပါ။ပြီးရင် ဖုန်းထဲမှာ developer option ဖော်ဖို့အတွက် setting / more / about device ဆိုပြီးအဆင့်ဆင့်သွားပြီးရင် အောက်ဆုံးက Build Number လေးကို ၇ ချက်လောက်ဆက်တိုက်တောက်ပေးလိုက်ပါ Devoloper Option ပေါ်လာလိမ့်မယ် Devoloper Option ထဲကို ဝင်ပြီး USB debugging အကွက်လေးကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ပြီးရင် setting / security / unknown source အကွက်လေးထဲမှာလဲ အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
၁၁။အပေါ်က Zip ဖြည်လို့ရလာတဲ့ smartzawgyi4.3advanced folder ထဲမှာ installer လို့ရေးထာတဲ့ window batch file ကို click နှစ်ချက်တောက်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ။ phone reboot ကျပြီးပြန်တက်လာရင် browser နဲ့ မြန်မာစာစမ်းကြည့်ပါ အစင်ပြေပါတယ် တစ်လက်စတည်း bagan keyboard creck version လေးပါ အောက်ကလင့်မှာယူလိုက်ပါ
Bagan Keyboard Pro 2.1.1(ကြိုက်တာထည့် Active ဖြစ်တယ်)